About — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akavaka kuzvikudza chiripo kutaura chokwadi chakasimba yemubhaibheri wechiduku, vane tsika dzakasiyana vateereri vave nechekuita uye simba nenzira. Kutungamirirwa Trip Lee, munyori, mudzidzisi, uye hudyu-hop Artist, Akavaka kuzvikudza anotsvaka kushongedzera uye kukurudzira sangano raKristu-vateveri vari unashamed kuzvikudza Ishe wavo.
Trip Lee ari munyori, mudzidzisi, hudyu-hop Artist, uye pfungwa mutungamiri. A mufundisi muAtlanta, iye anogara achiparidza uye anodzidzisa pane Misangano yechiKristu uye zviitiko, uye akaita mumhanzi wake zviuru vateereri munyika.
Mubhuku rake rekutanga, The Life Good, Lee anotaura upenyu hwakazara zvinowanikwa chete muna Kristu - upenyu kudarika chinhu chatingapiwa nenyika. bhuku rake rechipiri, simuka, anodana chizvarwa chevechiduku kwete kumirira kutevera Mwari, asi kuti simuka kurarama iye zvino.
Somunhu hudyu-hop Artist, mumhanzi Lee vaakagamuchira yakaoma kurumbidzwa, apo richisvika yakakura uye richikura vateereri. Ari akahwina akatisiyira mubayiro uye akanga nominated anoverengeka Dove Awards. nhatu ake okupedzisira Albums kunge debuted panguva #1 pamusoro Billboard Gospel machati, uye ake kupfuura ichangopfuura Album, simuka, debuted panguva #2 pamusoro Billboard Rap machati uye #16 pamusoro Billboard 200.
Trip dzakadzama chido kunyora kwake, kudzidzisa, uye achiita ndiko kuzivisa unyoro uye kubwinya kwaJesu Kristu.
Kuti bhuku Trip Lee kudzidzisa, paridza, kana kuita panguva chiitiko yako, kuonana WME.